प्युठान जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन्	Postpati – News For All
सलिम अन्सारी September 15, 2019 प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
सलिम अन्सारी/भदौ २९, प्यूठान । जिल्लाकै पुरानो र ठूलो प्युठान जिल्ला अस्पतालमा सरकारी चिकित्सक दरबन्दी १४ हो । हाल एकजना पनि दरबन्दिका विशेषज्ञ चिकित्सक छैन्न।
करारका दुई जना डाक्टरको भरमा सरकारी अस्पताल चलेको छ। दरबन्दिका चिकित्सक नहुँदा उपचारका लागि आएका बिरामीहरु उपचार नगरी घर फर्कन बाध्य छन । दैनिक २५० बढीले ओपीडी सेवा र भर्ना भई उपचार हुने अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सक बिहिन अबस्थामा छ।
निकसाइमन इन्स्टिच्युट अन्तर्गतका डा. सत्य वैद्य र सुनील सुनारले शल्यक्रियासहितको सुत्केरी सेवा र आकस्मिक सेवा धानेका छन् । चिकित्सक अभाव हुँदा २४ घण्टा डिउटी गर्नुपरेको डा बैद्यले बताउनुभयो । समयमै कर्मचारी व्यवस्था नहुने हो भने अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ उहाले भन्नुभयो ।’ ’दुई जनाले सिङ्गो अस्पताल धानेका छौं’ ।
३ बर्ष अघि मन्त्री परिषदको निर्णयले १५ शैयाको अस्पताललाई स्तरबृद्धि गरि ५० शैयाको बनाए पनी हाल सम्म बिशेषज्ञ सेवा पुग्न नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख विशाल सुवेदीले बताउनुभयो। जनशक्तिसँगै अस्पतालमा भौतिक सुविधा, प्रयाप्त औषधि र उपकरण समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन। औषधि किन्ने अख्तियारी कसैलाई छैन ।
अस्पतालको खातामा लाखौं रुपैयाँ हुँदाहुँदै पनि अरुलाई आर्थिक जिम्मेवारी नभएकाले समस्या देखिएको सुबेदिले बताउनुभयो । अस्पताल प्रमुख डा. शेषराज घिमीरेले डेन्टल सर्जन अस्मिता कोजुलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर एमडिको तयारीका लागी इन्ट्रान्स परिक्षा दिन आफू बिदामा बसेको बताउनुभयो ।
आर्थिक अख्तियारी नियमअनुसार आफूले दिन नमिल्ने उहाको भनाई छ । निकसाईमनको सहयोगमा असोजबाट अस्पतालमा एक जना चिकित्सक पठाउन लागेको र स्वास्थ्य सेवा बिभागमा समेत थप चिकित्सकका लागि अनुरोध गरिएको डाक्टर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयबाट आर्थिक अख्तियारी सहित एकजना चिकित्सक खटाउने आस्वासन आएको श्रोतले बताएको छ। प्युठान सहित छिमेकी जिल्ला गुल्मी, बागलुङ, अर्घाखाँची र रोल्पाका बिरामीले अस्पताल भरिभराउ छ । एउटै बेडमा २ बिरामी राखेर उपचार गरिएको छ ।
अस्पतालमा सेवा नभएपछि बिरामीले निजी क्लिनिकमा महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिने गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीले औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
प्युठान जिल्ला अस्पताल